शक्ति बने पीपीएलका सबैभन्दा महँगा खेलाडी, को कतिमा बिक्रि भए ? – Nepali Profile
शक्ति बने पीपीएलका सबैभन्दा महँगा खेलाडी, को कतिमा बिक्रि भए ?
बीबीसी । पहिलो चरणमा कसैले नकिनेका अनुभवी क्रिकेट खेलाडी शक्ति गौचन अन्ततः पोखरा प्रिमियर लिग पीपीएलका महँगा खेलाडीका रूपमा विक्री भएका छन्। आइतवार काठमाडौमा भएको अक्सन (लिलाम बढाबढ) मा गौचनलाई चितवन राइनोज क्लबले २ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैयाँमा खरिद गरेको हो। आफ्नो मूल्य आफैँले राख्न पाउने नयाँ प्रावधान अनुसार शक्तिले आफ्नो न्यूनतम मूल्य २ लाख १० हजार रुपैयाँ तोकेका थिए। उक्त मूल्य तिर्न पहिलो चरणको लिलाम बढाबढमा सहभागी ६ वटा टोलीले चासो देखाएनन्। तर विक्री नभएका खेलाडीहरूका लागि भएको दोस्रो चरणको लिलाम बढाबढमा उनी चितवनको छनोटमा परे। प्रतियोगिताको नियम अनुसार कुनै पनि क्लबले १३ लाख रुपैयाँभित्र १० खेलाडी किन्नुपर्ने थियो।
तर चितवनले नौजना खेलाडी किन्दा १२ लाख ८० हजार खर्च गरिसकेको हुँदा बचेको २० हजार रुपैयाँमा गौचनलाई किन्न पैसा पुगेन। त्यस्तो अवस्थामा २५ प्रतिशत जरिवाना तिरेर खेलाडी किन्न पाउने वैकल्पिक प्रावधान अपनाएर पारस खड्काको टोलीले गौचनलाई नै रोज्यो। चितवनका मुख्य खेलाडी राष्ट्रिय टोलीका कप्तान पारस खड्का हुन्। २५ प्रतिशत जरिवाना तिर्दा उनको मूल्य २ लाख ६२ हजार ५ सय पुगेको हो। जसमा गौचनले २ लाख १० हजार र जरिवानाको ५२ हजार ५ सय आयोजकले पाउनेछन्।
डेढ दशकभन्दा बढी समय नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको प्रमुख खेलाडीका रूपमा खेलेका गौचनले हालै मात्र राष्ट्रिय टोलीबाट सन्यास लिएका हुन्। विगतमा फ्रेन्चाइज क्लबको कप्तानी गर्दै आएका उनी यसपाली भने ढल्कँदो उमेरका कारण टाढा बसेको कतिपयको अनुमान छ। गौचनलाई महँगो मूल्य तिरेर भए पनि पीपीएलमा समावेश गर्नुलाई उनको सम्मानको रूपमा धेरैले अर्थ्याएका छन्। तर पीपीएलका आयोजक छुम्बी लामाले भने, सम्मान त हो नै। तर हेर्नूस् पीपीएलमा उनको प्रदर्शन झन् उत्कृष्ट हुनेछ।
सातजना खेलाडीको हकमा भने उच्चतम मूल्य २ लाख ५० हजारको बोली लागेको थियो। ती खेलाडीहरू बसन्त रेग्मी, करण केसी, विनोद भण्डारी, सागर पुन, आरिफ शेख, रोहित पौडेल र अनिलकुमार शाह हुन्। आइतवार भएको लिलाम बढाबढमा १ सय ७८ खेलाडीमाथि बोली लागेकोमा अधिकांश क्लबको छनोटमा सिनियर खेलाडी नै परेको देखिएको थियो। त्यो कारणले युवा खेलाडीहरूले पीपीएलमा मौका नपाउने भएका छन्।
कार्तिकको दोस्रो हप्ताबाट पोखरा रंगशालामा शुरू हुने पीपीएल नेपालको तेस्रो ठूलो फ्रेन्चाइज क्रिकेट लिग हो। यसअघि काठमाडौमा हुने एभरेष्ट प्रिमियर लिग (इपीएल) र धनगढीमा हुने धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) २० ओभरको फ्रेन्चाइज क्रिकेटको रूपमा स्थापित भइसकेका छन्।